BOQORKA Ilaalinta Deegaanka
Shirkadeena ayaa ahmiyad weyn siineysa ilaalinta deegaanka, waxaana sidoo kale naga go'an inaan isku dayno ilaalinta iyo hagaajinta deegaanka. Si loo gaaro ujeeddadan, aqoon isweydaarsigayaga wax soosaarka ayaa horeyba u rakibay boodhka, baabi'inta urta gaarka ah iyo hawo kale oo nadiif ah ...
Heerka ugu Dhameystiran ee Dayax-gacmeedka Dunida ee Shiinaha wuxuu ka yimid KINGER (2)
KINGER dhulka auger drive ayaa la sameeyay bilowgii Yantai Dongheng Makiinado Co,. Ltd aasaaskeeda, oo ku takhasusay soo saarista lifaaqyada qodista. Iyada oo si xasiloon oo tayo sare leh iyo noocyo dhammaystiran oo dhammaystiran oo ku yaal Shiinaha, waxaan ka dhignaa sumcadda 'KINGER' si fiican sumcad ugu leh suuqa. BOQORKA kale A ...
Heerka ugu Fiican ee Dunida 'Auger Model Range' ee Shiinaha wuxuu ka yimid KINGER (1)
Auger dhulka Haydarooliga waxaa inta badan ka kooban yahay madaxa madaxa, haleysid sariirtaada, daloolin-auger daloolin-iska caabin ah, tuubada Haydarooliga, iwm Waa qalab ku habboon hawlgalka ee aasaaska raso yar. mashruuc kala duwan sida ...